पानीबाट दीयो बल्ने गडियाघाट माताको अनौठो मन्दिर ! – Jagaran Nepal
पानीबाट दीयो बल्ने गडियाघाट माताको अनौठो मन्दिर !
एजेन्सी । संसारका केहि ठाउँमा अचम्मका घटनाहरु घटिरहन्छन् । भगवानलाई कसैले मान्छन् त कसैले मान्दैनन पनि । भगवानलाई जुन ठाउँका मानिसहरुले मान्दैनन् त्यहि ठाउँमा भगवानको चमत्कारलाई धेरै विश्वास गरिन्छ ।
मानिसहरु प्रत्येक दिन मन्दिर जान्छन्, पूजा गर्छन र दीयो बाल्छन् । तर के तपाईलाई थाहा छ ? भारतको एउटा मन्दिरमा दियो तेल, घिउबाट होइन पानीबाट बालिन्छ ।अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यामका अनुसार यो मन्दिर भारतको मध्य प्रदेश अन्तर्गत शाजापूर जिल्लाको गडिया गाउँमा गडियाघाट माताको मन्दिर छ ।
यो मन्दिर कालीसिन्ध नदीको किनारमा छ । सञ्चारमाध्यामका अनुसार गत ५ वर्ष यता यो मन्दिरमा घिउ, तेलबाट नभएर पानीबाट दीयो बाल्दै आइएको छ । पुजारी सिद्धु सिंहका अनुसार यो मन्दिरमा तेल, घिउ, डिजेल जस्ता बिभिन्न प्रकारका इन्धन दियो बाल्नको लागि चाहिदैन । यहाँ मात्र पानीले दीयो बल्छ ।
उनका अनुसार माताले सपनामा आएर पानीले दियो बाल्ने आग्रह गरेपछि पुजारी सिंहले दीयोमा पानी हालेको र नभन्दै दीयो पानीबाट बलेपछि अचम्ममा परेका थिए ।
पुजारी यो चमत्कार देखेर डराएका पनि थिए । उनले यो बारेमा २ महिनासम्म कसैलाई बताएनन् । तर केहि समयपछि गाउँलेलाई बताउँदा गाउँलेले नै उक्त कुराको विश्वास गरेनन् । जब पूजारीले दीयोमा पानी हालेर दियो बाले तब गाउँलेको होस उड्यो ।
यो मन्दिरमा कालीसिन्ध नदीबाट पानी ल्याएर दियोमा हालीन्छ । दियोमा पानी हाल्ने बित्तिकै पानी चिल्लो पदार्थमा परिणत हुन्छ । यो मन्दिरमा वर्षाको समयमा भने दियो बालिँदैन । किनकी नदीमा अत्याधिक बाढी आउने हुँदा नदीले मन्दिर छोप्छ ।